I-Raw Endurobol powder (317318-70-0) Abakhiqizi - Phcoker
SKU: 317318-70-0 Udidi: Sarm Series
I-Raw Endurobol powder (317318-70-0) ividiyo
I-Raw Endurobol powder (317318-70-0) Inkcazo
I-Raw Endurobol powder yiPARAR receptor. Isebenza kwindlela efanayo esebenzayo ngokusetyenziswa, kuquka iPARAR ne-protein kinase esebenzayo ye-AMP. Kwakuphandwa njengendlela yokunyanga ukunyanya, isifo sikashukela, i-dyslipidemia kunye nesifo senhliziyo. I-Raw Endurobol powder inefuthe lokusebenzisana xa idibene ne-AICAR: intlangano iboniswe ngokunyusa kakhulu ukunyamezela ukunyamezela kwizifundo zezilwanyana ngaphezu kweyodwa i-compound yodwa.
I-Raw Endurobol powder ingasetyenzwa ngabadlali njengendlela yokuphucula ukusebenza kweziyobisi ezingazange zilawulwe ngokusemgangathweni yimimiselo okanye zifunyenwe ziimvavanyo eziqhelekileyo. Omnye wabaphandi abaphambili ekufundeni ngokunyamezela ngokugqithiseleyo ngenxa yoko wavelisa uvavanyo lomchamo ukuze ahlolisise isiza, kwaye wenza ukuba lufumaneke kwiKomidi yeeOlimpiki yamazwe ngamazwe.
I-Raw Endurobol powder (317318-70-0) Suqobo
Igama lemveliso Raw Endurobol powder
Igama leKhemikhali 2-[2-methyl-4-[[4-methyl-2-[4-(trifluoromethyl)phenyl]-1,3-thiazol-5-yl]methylsulfanyl]phenoxy]acetic acid;GW-501615;CB6465728;2-(4-((2-(4-(Trifluoromethyl)phenyl)-4-methylthiazol-5-yl)methylthio)-2-methylphenoxy)acetic a;GW1516; GSK-516.
uhlobo Numama Raw Endurobol powder
Iqela leziyobisi Ama-inhibitors; ama-Intermediates & Fine Chemicals; Amachiza; Iimveliso zeSulfur & Selenium; kl; I-inhibitor; i-Antineoplastic; i-SARM (i-modulator ye-androgen receptor); i-Sarms
Inani leCAS 317318-70-0
I molecular Fi-ormula C21H18F3NO3S2
I molecular WSibhozo 453.494 g / mol
IMasaisotopic Mass 453.068 g / mol
Indawo yokunyibilika 134-136 ° C
Bilisaba Point 584.543ºc kwi-760mmhg
I-Biological Half-Life iiyure 16-24
Sukufaneleka I-DMSO: i-soluble20mg / mL, icacile
Raw Endurobol powder Aukuguquka I-agonist ye-PPARβ ekhethiweyo kwaye enamandla; I-drug test yenzelwe ukulawula i-lipids kunye nokwandisa izinga le-HDL, okanye i-cholesterol enhle, egazini. I-cell-permmeable, i-thiazolyl isakhi esenza njengento enamandla, inxulumene kakhulu, PPARδ agonist.
I-Raw Raw Endurobol powder (317318-70-0)
Ukuqonda ukuba yiyiphi i-endurobol, kufuneka uqonde oko akuyiyo. Ngelixa abaninzi abantu bela i-endurobol kwiklasi ye-SARM, le nxalenye yeekhemikhali ayikho i-SARM kodwa i-PPARδ (delta) ye-agonist receptor.
Kubalulekile ukuhlukanisa le nyaniso kuba ithintelo enkulu ye-endurobol emzimbeni inxamnye neeSARM ezininzi. Impembelelo ye-Endurobol isoloko iyinxalenye yokuba ivuselela i-oxidation ye-fat while i-SARM ezininzi zisetyenziselwa iinjongo ze-anabolic kuphela, ezifana nokwakha isisu kunye namandla.
Njengoko siza kuxubusha kamva, oku kwenza i-endurobol ibe yinto enhle kulabo bafuna ukunciphisa amanqamzimba emzimbeni kunye nokuphucula ezinye izibonelelo ezinxulumene nemethambo.
Ngaphantsi kwileyibhile yeciksi ye-GW-501516, i-endurobol yaqala ukuphuhliswa ngokuyinhloko ukuphatha i-dyslipidemia; okanye inani elingaqhelekanga leoli kunye ne-cholesterol egazini. Kodwa emva kokuba kuqalwe izilingo, kwabonakala ukuba i-endurobol inokunye inzuzo yokwelapha.
Ukongezelela ekuphuculeni ngempumelelo amaprofayili e-lipid, kwaqaphela ukuba i-endurobol njenge-PPAR ye-receptor agonist iya kuba yintsebenziswano enamandla yokunyanyisa ukunyamezeka, ukuphucula umthamo wesifo kunye nokukhusela okanye ukunyanga isifo se-metabolic sifana nohlobo lwe-II IIshukela.
Kodwa njengoko uzakufunda kungekudala, le khemikhali ebonakalisa imimangaliso ayikho ngaphandle kweziphene zayo, ezinye zazo zibalulekileyo.
I-Raw Endurobol powder (317318-70-0) Indlela yokuSebenza
Iindlela ze-Endurobol zifana nezo zi-SARM. Eneneni enye yezinto ezinomdla ezithandekayo ndizijongene nazo. Le khemikhali ivumela umzimba ukuba uncede ukulawula i-fatty acid metabolism eyamangalisa kakhulu.
Njengoko kukhankanywe ngaphambili, i-Endurobol yi-PPARδ receptor agonist kwaye ingadideki ne-SARM. Eyona nto, into eyenza ukuba isebenze iprotein ye-PPAR-delta kwiiseli zomzimba. I-PPAR-delta iyinzwa ye-acid acids, efumaneka kwiimisipha. Xa i-delta ye-PPAR ishintshiwe, ukukwazi ukutshisa amafutha kunyuke.
Oku kwaxhaswa kwakhona ngophando olwenziweyo kwiimiceba. Iigundane zanikwa i-Endurobol kwaye unyamezelo lwabo lukhulu kakhulu.
I-Endurobol yinto ethembisayo kakhulu ebangela ukutshisa amafutha. Unako ukuphucula ukusebenza kwakho njengoko kungekho nanye iziyobisi. Inyaniso yokuba le miba emihle iye yaxhaswa yizifundo yenza kube ngcono.
benefits I-Raw Endurobol powder (317318-70-0)
◆ Into yokuqala onokuyilindela esuka kwi-Endurobol iphuculwe ukusebenza kwenhliziyo. Uphando lubonisa ukuba i-Endurobol yandisa kakhulu umgama osebenzayo wegundane kwiimvavanyo zokunyamezela ukunyamezela. Ukuqina kwakho kuya kwanda njengoko kungakaze kwenzeke ngaphambili, uya kufuna ukuqhubeka uzigxotha. Ngenxa yokuba kuphucula kakhulu amandla kunye nokunyamezela kuvinjelwe yi-WADA kuwo wonke umdlalo wezemidlalo. Oku kufuneka kukunike ingcamango yendlela i-GW501516 enamandla ngayo.
◆ Into elandelayo elandelayo nge-Endurobol kukuba iyatshisa ngokukhawuleza amanqatha. I-Yep, kunjalo-ngaphandle kwe-stamina ephuculweyo, uya kutshisa ioli ngokukhawuleza. Kuya kukunceda ukuba ubambelele kwiimisipha zakho ngelixa ulahlekile kwikhalori. Abanye abantu badibanise i-GW-501516 kunye ne-SR-9009 ukudala umshini oshisa umbane. Ndithembele, GW501516 INDLELA enamandla ngaphezu kwazo zonke ezinye izinto ozamile.
◆ I-Endurobol inokuchaphazela entliziyweni nasemithanjeni yegazi. Uphononongo olwenziwa kwiimicebe lubonise ukuba umthamo omncinci we-Endurobol unciphise umonakalo owenziwe kwiisisu kwiimitha. Gcina ukhumbule ukuba olu phofu lwenziwa kwiimicebe, ngoko ayiqinisekanga ukuba le nto isebenza kubantu.
◆ Kufanelekile ukukhankanya ukuba le ngqungquthela inekhono lokukhuthaza ukukhula kwemisipha. Ngokusebenzisa iPARAR-Delta kungekhona nje ukuba i-fat eyancibilika, kodwa iimbumba ze-muscle nazo zivuselelwe.
◆ Akukho ukukhutshwa kwe-hormone system. Ngokungafani ne-Testolone, i-Endurobol ayiyi kuba nempembelelo kumanqanaba akho e-testosterone, oku kuthetha ukuba ayifuni i-PCT. ◆ I-Endurobol inokudlala indima ebalulekileyo ekuphulukisweni kwilonda.
I-Raw Endurobol powder ephakanyisiweyo (317318-70-0) Isisombululo
Amanani aphakathi kwe-2.5 ukuya kwi-10mg ngosuku ngelifundo lweklinikhi.
Uza kubona abasebenzisi abaya kwi-30mg ye-Endurobol powder ngosuku. Ngokuqhelekileyo, abantu abenza njalo banamava kakhulu kwaye baye bawuqhuba ngokuphindaphindiweyo kwixesha elidlulileyo. Ndiya kuzama ngokwenene ukuhlala kude nemilinganiselo ephakamileyo yepowder powder kuba kukho ulwazi oluncinci olukhoyo.
I-Endurobol ine-half-life of 12-24 iiyure. Oku kuthetha ukuba uya kufuneka uyenze kabini ngosuku. Uninzi lwabantu ludla ngokukhawuleza kunye nangoko kusihlwa, oku kuya kugcina amanqanaba emzimbeni ozinzile.
Ubude bomjikelo akumele kube ngaphezu kweeyure ze-6-8. Kwakhona, mhlawumbi uza kubona abanye abasebenzisi bayithatha kwiiveki ze-8 ngaphezulu kodwa kube yingozi. Ndiya kuhlala ndicinga ukuba ndidlala ngokukhuselekileyo kwaye ugcine umlinganiselo wezantsi kwaye ubude bomjikelezo bufutshane.
I-Endurobol ayifuni i-PCT, unokuyinqanda nje emva kokuba umjikelezo usuphelile.
Abanye abantu baya kubeka le ngxube kunye ne-Ostarine powder kunye ne-Andarine powder ukudala i-SARMs Stack. Eyona nto ingundoqo kuba iphumelele kakhulu ukugcina imisipha.
Imiphumela I-Raw Endurobol powder (317318-70-0)
Nangona kunjalo ukuba izibonelelo ezibonakalayo ze-Endurobol ziyamangalisa, ayikho ngaphandle kweziphene zayo kwaye ngelishwa, zingaba nesizathu sokuphepha ukusetyenziswa kwezinto ngokupheleleyo.
Enye yeempawu ezikhangayo ze-SARM kunye ne-PPAR receptor agonists kukuba ziqhelekanga ezingenayo i-androgenic kwaye zijolise nakumathenda athile. Oku kuthetha ukuba iziphumo zecala zihlala zikhawulelana kwaye zingenamandla, kwaye kwimeko ye-Endurobol, oku kuyenyani. Ininzi, abasebenzisi be-Endurobol ababiki naziphi na iziphumo ezimbi ezibi.
Nangona kunjalo, i-Endurobol ihamba nemibandela emibili, kwaye abaninzi banokukhawuleza ukugxotha: unokwenza umdlavuza kunye nomonakalo wesibindi.
I-S-23 powder yi-bioavailable yomlomo, i-nonsteroidal i-androgen receptor modulator (SARM) eye yaboniswa ukwandisa i-.......
Amandla: 1360kg / inyanga